Kulankii 8-aad ee Golaha Shacabka oo maanta u baaqday Kooram la’aan – Kalfadhi
Kulankii 8-aad ee Golaha Shacabka oo maanta u baaqday Kooram la’aan
Kulanka 8-aad ee Golaha Shacabka ayaa baaqday maanta. Waxa ay noqoneysaa markii 7-aad ee uu goluhu ka baaqdo kulan Kalfadhigaan 5-aad. Baaqashada Kulanka Golaha Shacabka ee maanta waxaa sabab u ah Kooram la’aan, sidaas ayeyna inta badan, qeyb ahaan, u baaqan jireen kulamadii hore ee golaha.
Xildhibaannada soo xaadirtay kulankii golaha ee maata ayaa dhamaa, tiro ahaan, 128 xildhibaan, waxaana, si uu u furmo kulanka golaha, loo baahnaa 11 xildhibaan oo kale, oo waxaa Koormaka uu Golaha Shacabku kulan ku furan karo ugu yar 139 xildhibaan.
Ajandaha Kulanka Golaha Shacabka ee maanta ayaa ahaa Aqrinta Labaad ee Hindise Sharciyeedka Shirkadaha Ganacsiga, oo Arbacadii loogu qeybiyey xildhibaannada kulankoodii maalinkaas ee Xarunta Golaha Shacabka.
Laakiin, Guddoonka Golaha, oo saacad ka badan oo dheeraad ah ku daray waqtiga uu furmi lahaa kulanka golaha, ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqay inuu kulankoodii baaqday, kadib markii uu xaqiiqsaday ineysan xildhibaannada joogaa dhameen Kooramkii uu kulanka ku furmi lahaa.
Baydhabo oo Xildhibaanno ku soo biiri doona Golaha Shacabka lagu dooranayo maanta
Xildhibaan sheegay in Kulankii Golaha Shacabka uu maanta u baaqday Xisbiga Himilo Qaran